လက်တွဲဖော်အစစ်နဲ့မတွေ့ခင် ဘယ်နှစ်ယောက်နဲ့ကြုံတွေ့ရနိုင်မလဲ ??? - ONE DAILY MEDIA
လက်တွဲဖော်အစစ်နဲ့မတွေ့ခင် ဘယ်နှစ်ယောက်နဲ့ကြုံတွေ့ရနိုင်မလဲ ???
များစွာသော dating app များဟာ လူသစ်များအားတွေ့ဆုံရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဘယ်လိုလူ‌တွေ ရွေးစရာရှိလဲဆိုတာကိုလည်း အပြင်ထွက်ကြည့်စရာတောင်မလိုပါဘူး။ သို့သော်လည်း အချို့လူများအတွက် စွံရန်ခက်ခဲနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကြောင့် Dominik Czernia, ဆ်ိုသူ .ရူပဗေဒပညာရှင်က လက်တွဲဖော်ကိုရှာဖွေရာမှာ သိပ္ပံနည်းကျချဉ်းကပ်ရန် ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုက်ညီ သောလက်တွဲဖော်ကိုရှာဖွေရန် သိပ္ပံကမည်သို့ကူညီပေးနိုင်သည်ကိုပိုမိုသိလိုတာကြောင့် လေ့လာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ခံစားချက်တွေကိုအခြေခံပြီးဆုံးဖြတ်ချက်တွေချလေ့ရှိပါတယ်၊ အချစ်ကိစ္စမျိုးမှာ ဒါကတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ပုံရပါတယ်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ သင်္ချာသဘောတရားအချို့ကိုအသုံးချလိုက်ခြင်းမှလည်း အကျိုးကျေးဇူးများရနိုင်ပါတယ်။
Omni Calculator သည်သင့်ကို ကူညီပေးနိုင်မည့် ပိုလန် startup တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကဘယ်အရာကိုမဆိုတွက်ချက်နိုင်တဲ့စိတ်ကြိုက်တည်ဆောက်ထားတဲ့ဂဏန်းတွက်စက်ပေါင်းရာနဲ့ချီကိုဖန်တီးခဲ့ပါတယ်၊ လန်းဆန်းနိုးကြားလာဖို့၊ ဘယ်အချိန်ကနေစပြီးတော့ပိုကီမွန် GO ကစားခြင်းအားဖြင့်ကိုယ်အလေးချိန်ဘယ်လောက်ကျနိုင်သလဲ စသဖြင့် တွက်ချက်နိုင်သလို Dominik Czernia သည်လည်း ချိန်းတွေ့သီအိုရီဂဏန်းတွက်စက်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။
(၂) ပြသာနာ ဖြေရှင်းရမယ့်အချိန်ကိုသိနိုင်မယ့် တွက်ချက်မှုတစ်ခုရှိပါတယ်
ဤဂဏန်းတွက်စက်ဟာ လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုအတွက်မှန်ကန်သောအချိန်ကိုရွေးချယ်ခြင်းလုပ်ပေးပါလိမ့်မယ် ။ ဆိုလိုသည်မှာချိန်းတွေ့ချိန်မှာ အသုံးချခြင်းဖြင့် သင်နှင့်အတူရှိနေသောသူသည်သင့်အတွက်ပြီးပြည့်စုံမှုရှိမရှိ (သို့) ပိုကောင်းတဲ့သူကိုဆက်လက်ရှာဖွေသင့်သလားဆိုသည်ကိုတွက်ချက်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
(၃) မှန်ကန်သော အတွဲအဖက်နှင့် တွေ့ဆံနိုင်ရန် အခွင့်အလမ်းများပြားလာစေပါတယ်
ဥပမာအားဖြင့် သင်တစ်သက်လုံးမှာလူ ၃၅ ယောက်နဲ့ချိန်းတွေ့ဖို့စီစဉ်ထားတယ်ဆိုရင်၊ မင်းပထမ ၁၂ ယောက် (၃၇%) ကိုငြင်းခဲ့ရပါမယ် ။ နောက်တစ်ဆင့်က တော့ သင်မအရင်တွေ့ဖူးတဲ့သူတွေထက်ပိုကောင်းတဲ့လူကိုရွေးဖို့ပါပဲ။ ဒီနည်းလမ်းက သင့်တော်တဲ့လူနဲ့တွေ့ဆုံဖို့အခွင့်အလမ်းပိုပေးပါလိမ့်မယ်။
အတည်အတံ့ လက်တွဲဖော်ကိုရှာချင်တဲ့လ ၊ ဒါမှမဟုတ်နှစ် ၊ မင်းအတွက်အကောင်းဆုံးလက်တွဲဖော်ဟာ ထိပ်ဆုံး ၅ ယောက် ဒါမှမဟုတ် ၁၀ ယောက်ထဲကတစ်ယောက် လား စသည်ဖြင့်သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ သင်ငြင်းပယ်လိုသောရက်စွဲ နှင့်သင်ကိုယ်တိုင်ငြင်းပယ်ခံရမည့်အခွင့်အလမ်းများ ယှဉ်တွဲတည်ရှိနေပါတယ်။
သင့်တစ်သက်မှာ တွေ့ကြုံရမယ့် အတွဲအဖက်အတိအကျကိုသိဖို့နည်းလမ်းမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ဒီဂဏန်းတွက်စက်က သင့်ကို လက်တွဲ‌ဖော်ရှာဖို့ရာ လက်မလျှော့ဖို့အားပေးနေပါတယ်။
လေ့လာမှုအရလူတွေဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ စည်းမျဉ်းအရ ခန့်မှန်းတာထက်စောလေ့ရှိပါတယ်။ သဘောတရားက ဆက်ရှာကြည့်ရင်ပိုသက်သာတဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုရနိုင်ပါရဲ့နဲ့ လက်ရှိပစ္စည်းကို စျေးပို‌ပေးပြီးဝယ်လိုက်မိခြင်းမျိုးပါပဲ။
ဒီဂဏန်းတွက်စက်က သင့်တစ်သက်မှာချိန်းတွေ့မယ့်လူ ဦးရေကို ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းမသိနိုင်ပါဘူး။ ပထမဆုံးချိန်းတွေ့တာနဲ့ သင့် soulmate ဖြစ်
ဖို့က တော့ လုံး၀မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အားလုံးကိုခြုံငုံကြည့်ရင် သင့်နှလုံးသား ဆန္ဒကိုနားထောင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်၊ သင်က မှန်ကန်တဲ့လက်တွဲ‌ဖော်ကို အချိန်အကြာကြီးရှာနေခဲ့တာ တောင် မတွေ့သေးရင်လည်း မျှော်လင့်ချက်မပျက်ဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။
သင်ရော “လက်တွဲဖော်” ရှာနေသလား။ ဒီနည်းပညာတွေကို ဘယ်လိုမြင်လဲ ?